MacBook aan lahayn kumbuyuutar ayaa loo oggolaaday Apple | Waxaan ka socdaa mac
MacBook A aan lahayn kumbuyuutar ayaa waxaa u idman Apple
Wax walba way soo noqdaan. "Kumbuyuutar" kii ugu horreeyay ee gacmahayga dhaafay wuxuu ahaa Sinclair ZX81. Saaxiibkiis machadka ayaa u iibsaday. Maaddaama ay kayd ahayn, haddii aan rabno inaan "wax ciyaarno", waa inaan marka hore ku qornaa dhammaan tilmaamaha ciyaarta Basic. Saaxiibkay ayaa aniga igu amraya, oo laga soo qaatay joornaalada billaha ah ee xilligaas soo bixi jiray, waana ku qori jiray. Waxaan ku ciyaari lahayn pixels-yadaas waaweyn ee madow iyo caddaan in yar, maalinta xigtana waan dib u bilaabi doonnaa.
Muuqaalkan "guridda" waa mid khuseeya maxaa yeelay wuxuu yiri ZX81 wuxuu lahaa kumbuyuutar "keyless". Waxay ahayd hal xuub caag ah oo siman oo leh furayaal shaashad daabacan, oo ay ahayd inaad riixdo si aad ula xiriirto wareegga daabacan ee hoosta maraya. Sida kuwa kale ee Casio ee kalkuleyta "kaarka deynta" ah. Hadda Apple wuxuu sharciyeeyay MacBook aan lahayn furayaal, sida kumbuyuutarkaas uu allifay Clive Sinclair. Wax walba way soo noqdaan.
Apple waxaa lasiiyay rukhsad kale oo laxiriira MacBook. Dhowr usbuuc ka hor ayaan soo dhigay mid kale noticia patent kale oo sharraxay fikradda ah MacBook leh aagag haptis ah oo ku saabsan kiiska halkii laga raaci lahaa trackpad-ka. Munaasabaddan shatiga cusub ee la siiyay Maarso 30, 2021 wuxuu umuuqdaa inuu baabi'inayo ma aha oo kaliya trackpad, laakiin sidoo kale kumbuyuutarka buuxa.
Shatigan cusub wuxuu xaq u leeyahay "qaab dhismeedka xasaasiga ah ee cadaadiska lagu xirayo qalabka elektarooniga". Fikradda ayaa ah in laga fogaado dhibaatada ku jirta teebabka farsamada, maadaama Apple ay ku tijaabisay teebabka masruufka leh ee dhibaatada leh oo mararka qaar ay la soo daristo cilado aan la xallin karin markii boodhka iyo wasakhda ku urureen furayaasha hoostooda.
Hal aag siman oo laysku halayn karo
Sawir si cad uga tarjumaya fikradda patent-ka.
Fasaxan, aagga aqbashada, halkaasoo kumbuyuutarka laptop-ka iyo trackpad-ka ay caadi ahaan yaalliin, waa dusha biro hal xiriir ah. Dusha sare waxaa ka hooseeya laba lakab oo kontaroolada gelinta lagu dhisay.
Lakabka cadaadiska keenaya ayaa siin kara isticmaalaha jawaab celin iyo godad yar yar oo tarjuma dusha sare ee biraha ayaa u oggolaan kara badhannada ama geesaha inay ka dhex muuqdaan oo ay dejiyaan goobo kala duwan.
Waa wax xiiso leh in, sida ku xusan patent-ka, isticmaaluhu uu isku hagaajin karo aagga laga soo galo naftiisa. Marka halkii laga heli lahaa kiiboodhka qwerty, dusha oo dhan waxaa loo isticmaali karaa sida keyd tiro, ama hal trackpad, tusaale ahaan.
Waan arki doonnaa haddii maalin uun fikraddan horay loo sii sharciyeeyay ay dhab noqon doonto, ama si fudud lagu sii hayn doono iyada oo loo haysto patent ka badan boqolaal iyaga ka mid ah oo ku harsan fikradaha iyo mashaariicda kaliya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » MacBook A aan lahayn kumbuyuutar ayaa waxaa u idman Apple
Quest Mythic: Raven's Banquet episode bonus kahor xilli ciyaareedka XNUMX